Author Topic: အမောပြေဟာသမှတ်စု (Read 504668 times)
« Reply #670 on: September 09, 2011, 04:16:49 PM »
« Reply #671 on: September 10, 2011, 12:20:20 PM »
ကျေးဇူးပါ yankalay80 ထံမှ ကူးယူပါ၏) ခင်ဗျား။
တစ်ခါတုန်းကပေါ့ ......ပိုက်ဆံ မရှိလို့ ဖာခံ စားတဲ့ ဖာသည်မ ကို ပိုက်ဆံ မရှိလို့တောင်းစား နေရတဲ့ သူတောင်းစားက လိုးချင်လို့ချဉ်းကပ်ပါလေရော....
( မ ) "ဟဲ့ အကောင် နင် လိုသူတောင်းစားကများ ပါးကျိုးသွားမယ်" ပေါ့....
( ကျား ) "ဒီကောင် မ နောက်မှ တွေ့မယ်"
...ဆိုပြီင်္း ရသမျှပိုက်ဆံ ကို စု သတဲ့ ........
ငွေလေး တော်တော် စု မိတော့
( ကျား ) "လာစမ်း ဖာသည်မ ရော့အထုပ် ......ပေး အဖုတ်"
လို့ ပြောလိုက်တယ်......ဟိုကလဲ ဘယ်ရမလဲ
( မ ) "ဒီပိုက်ဆံ လောက်နဲ့ တော့ အဖုတ် တော့မရဘူး နောက်ဖင်ပဲ လိုး"
လို့ ပြောလိုက်တယ် ..............
( ကျား ) "ရပါတယ် နောက်ဆိုလဲ နောက်ပေါ့ ......."
ဘာပြောကောင်းမလဲ အတွင်းခံ ဘောင်း ဘီတောင် မချွတ်လိုက်ရဘူး .အမုန်း လိုးပစ်လိုက်တာ ........
ဖာသည်မ ကလဲ စိတ်အရမ်း ဆိုးသွား ပြီး
( မ ) "သေနာကောင်"
ဆိုပြီး အီးပေါက်လိုက် တယ် ..........
( ကျား ) "ဟဲ့ ကောင်မ ဒါဘာလုပ်တာလဲ "
လို့ မေးလိုက်တယ် .......ဖာသည်မ က
( မ ) "ဘယ်သိမလဲ သူတောင်းစား ကောင်းစားမို့လို့ မိုး ခြိမ်းတာနေမှာပေါ့"
လို့ ပြောလိုက်တယ် .......
ဒါ ငါကို သက်သက် စော်ကား တာဆိုပြီး သူတောင်းစား ကလဲ ဖာသည်မ ဖင်ထဲ သေးပန်း ထည့်လိုက် တယ် ........
ဖာသည်မလဲ စိတ် အရမ်း ဆိုးပြီး ရုန်း တာပေါ့...........
( မ ) "ရှင် မရုတ် မာ နဲ"့ ပေါ့ ........
( ကျား ) "ခုနက မိုး ခြိမ်း လိုက်လို့ အခု မိုး ရွာလိုက်တာပါ"
လို့  ပြန်ပြောပြီး သူတောင်းစား လဲ ဘယ်အလွတ်ပေးမလဲ နောက် ကနေ ချုပ်ပြီး အတင်း ဆက်လိုး တာပေါ့.......
ဒါနဲ့ ဖာသည်မက ရုန်း လို့ ကလဲ မရ ....ဒေါသကလဲ ထွက်တော့ အီးအီးတွေ ပါချပြစ်လိုက် တာပေါ့.......
သူတောင်းစားလဲ အရမ်း စိတ်ဆိုးသွားပြီး
( ကျား ) "အော် မင်း ဘက်က မိုး ရွာလို့ ရွံ့ ဘွက်တွေ ထပြတော့ ငါကလဲ ချော်လဲ ပြီဟေ"့ 
ဆို ပြီး .....
အရှေ့  စောက်ပက်ကို အား ကုန် လိုး လိုက်ပါတော့ တယ် ...........
ဒီတွင် ဖာသည်မလဲ အရာသာတွေ့ သွား ပြီး ဒီလိုတွေး လိုက်တယ် ...
( မ ) "အော် သူလဲ ဗွက်ထတော့ ချော်လဲ ရှာ မှာ ပေါ့လေ"
ဆိုပြီး ငြိမ်နေ လိုက်တော့ တယ် ...............
ညီ အစ်ကို တို့ တစ်တွေလဲ ဗွက် ထဲ မှာ ချော် မလဲ မိစေနဲ့ နော်...............
« Reply #672 on: September 11, 2011, 04:23:15 AM »
Friends are like underwear. .. Some crawl up your butt. Some snap under pressure. Some don't have the strength to hold you up. Some getalittle twisted. Some are your favorite. Some are holy. Some are cheap. Some are naughty. And some actually cover your butt when you need them to.
« Reply #673 on: September 11, 2011, 01:42:09 PM »
ဒါပေမယ့် မင်းအတွက် ကိုယ် အနမ်းပေါင်း ၁၀၀ ပို့လိုက်တယ်နော်
၁။ နွားနို့ ပို့သမား ကို တစ်လစာ နွားနို့ အတွက် အနမ်း (၂) ပွင့်
၂။ လျှပ်စစ် ဌာန က လူကို တစ်လစာ အနမ်း (၇) ပွင့်
၃။ အိမ်ပိုင်ရှင် ကတော့ အိမ်ငှားခ မယူ ပဲ တစ်နေ့ ကို အနမ်း ၂ ပွင့် ၃ ပွင့် လာယူတယ်
၅။ တစ်ခြားအထွေထွေ က အနမ်း ပွင့် ၄၀
ဒါပေမယ့် မပူပါနဲ့နော် ချစ်မှာ အနမ်း ၃၅ ပွင့်ကျန်သေးတယ်။ ဒီလ တော့
« Reply #674 on: September 12, 2011, 01:04:20 PM »
အကြောင်းအရာ။..........။ ချစ်သူရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခြင်း
ကျွန်တော်မျိုး တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် တစ်နှစ်သာကာလအတွင်း သခင်အပါး အမြဲခစား လေ့လာသင်ယူခဲ့၏။ အမိန့်တော် နာခံခဲ့၏။ သခင့်အလို အမြဲဖြည့်ဆည်းခဲ့၏။ နေကောင်းကျန်းမာပါသလားဟု အမြဲ မေးမြန်းလျှောက်တင်ခဲ့ရ၏။
ချစ်သူဟူသောတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်စဉ် စိတ်နှလုံးကြီးမြတ်ရ၏။ နွေးနွေးထွေးထွေး ဆက်ဆံရ၏။ ဂရုတစိုက် ယုယရ၏။ တစ်ခြားအမျိုးသားများနှင့် သခင်စကားလက်ဆုံကျလျှင် (သို့) သူတို့ကိုတော်ကြောင်း၊ တတ်ကြောင်း သခင်ချီးကျူးလျှင် မနာလို ဝန်တိုစိတ်မရှိရ။
တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် အမှားလုပ်ခဲ့မိလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ သခင်နှင့် အငြင်းပွားမိလျှင်သော်လည်းကောင်း ကျွန်တော်မျိုးအား အလုပ်ထုတ်ရန် သခင်အမိန့်ချ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သော်လည်း နောင်နောက် ၄င်းအမှားမျိုး မလုပ်မိအောင် ကျွန်တော်မျိုး ဆင်ခြင်ပါ့မည်ဟု ဝန်ခံဂတိပေးပြီး ဤတာဝန်ကို ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ခဲ့၏။
သူငယ်ချင်းများနှင့် ရယ်ရယ်မောမော သခင်ပျော်ပါး၏။ မကြာခဏ သူတို့နှင့် သခင် တွေ့ဆုံစားသောက်၏။ ထိုသူငယ်ချင်းများကို ကျွန်တော်မျိုး အားကျပါသည်။ သူငယ်ချင်း တာဝန်မှာ သခင့်အပါး အမြဲခစားစရာ မလို။ ယခုဖုန်းဆက် ယခုအပါးတော် ရောက်စရာမလို။ ကြိုပို့စရာ မလို။ ငွေရှင်းစရာ မလို။ လက်ဆောင်ပဏ္ဍာ ဆက်သရန် မလို။ သခင် မျက်ကွယ်ပြုမှု ခံစရာမလို။ နေခြည်ပမာ ကြည်လင်သော သခင့်အပြုံးကို သူတို့ အမြဲ ဖူးမြင်ရ၏။ ချိုသာသော သခင့်စကားကို သူတို့နားဆင်ရ၏။
ချစ်သူရာထူးမှ နုတ်ထွက်ပြီး သူငယ်ချင်းအဆင့်သို့ လျှော့ချပေးရန် လျှောက်တင်ထားသော အသင်၏ စာအား ဖတ်ရှုပြီးနောက် အထက်လူကြီး အုပ်ထိန်းသူမိဘများနှင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရှင်းလင်းချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
အသင်လာရောက် တွေ့ဆုံမေးမြန်းစဉ်က ချစ်သူဟူသည့် တာဝန်ဖြစ်သည်။ သူငယ်ချင်း မဟုတ်ဟု အလုပ် စလျှောက်စဉ်က အသင်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ အသင်အား စမ်းသပ်ကာလမှာပင် အသင်၏ တာဝန်ယူညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် အလုပ်ထုတ်ခံရလုနီးနီး ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ကြိုးစားစွမ်းဆောင်ပြီး အမှုတော်ထမ်းပါမည်ဟု အသင်၏ ဝမ်းနည်းပက်လက် တောင်းဆိုဝန်ခံဂတိပေးမှုကြောင့် ဤရာထူးကို ခန့်အပ်ခဲ့သည်။
ချစ်သူ့တာဝန်အား လွဲပြောင်းသူပေါ်လာမှ အသင့်အား လိုအပ်သည့်နေရာ - ဥပမာ- သူငယ်ချင်းနေရာသို့ ပြောင်းရွေ့ပေးမည်။ သို့မဟုတ် အသင်သဘောနှင့် အသင် လုံးဝထွက်ခွာမည်ဆိုလည်း ရ၏။ ကိုယ့်သဘောနှင့်ကိုယ် ထွက်ခွာခြင်းသည် လျှော်ကြေးမရကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
(www.youthawnt) မှာ ဖတ်မိတာလေးပါ။ သဘောကျလို့ ဘာသာပြန် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ပြုံးပျော် ရယ်မောနိုင်ပါစေ
« Reply #675 on: September 12, 2011, 01:18:02 PM »
♥တစ်ခါတုန်းက ဦးထုပ်ရောင်းသမားတစ်ယောက်ဟာ သူ့အိမ်ကထွက်ပြီး ဈေးကို
တယ်…။ ခြင်းတောင်းကြီးကို ပစ်ချပြီး
ရာက်ကုန်တယ်…။ အဲဒီဦးထုပ်တွေ သူပြန်ရအောင်
ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲဆိုပြီး အကြံထုတ်တယ်…။ သူက အားတဲ့အချိန်မှာ
နဲ့ သူက ဦးထုပ်ကို
မျောက်တွေခေါင်းပေါ်ရောက်နေတယ်…။ ဒီတော့ သူ့အဘိုးပြောခဲ့ဖူးတာ အမှတ်ရပြီး
သူ့အဘိုးနည်းအတိုင်း ဦးထုပ်တွေပြန်ရအောင် ကြိုးစားတယ်…။ သူက
ဦးထုပ်ကိုချွတ်ပြီး ခေါင်းကုတ်တယ်..။ မျောက်တွေကလည်း
တွေးမိတဲ့အခါ ဒီပုံပြင်လေးကို အမှတ်ရပါစေ
« Reply #676 on: September 12, 2011, 03:09:23 PM »
Quote from: drlanmadawthar on September 12, 2011, 01:18:02 PM
နောက်လဲ အဲလိုမျိုးလေးတွေ တင်ပေးနော်..........
« Last Edit: September 13, 2011, 05:55:32 AM by imail »
« Reply #677 on: September 12, 2011, 03:29:52 PM »
Quote from: hotsexygirl on September 12, 2011, 03:21:56 PM
ကျောင်းသူမမ ဆက်ဆက် က တင်ထားတဲ့ ပို့စ်ကို ကြိုက်ပါတယ်လို့ ပြန်ပါတယ်ခင်ဗျ
ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားများ အကြိုက်လည်း တင်ပေးပါဦးခင်ဗျ
« Reply #678 on: September 12, 2011, 05:47:43 PM »
သူများတင်တာ ကို အားကျလို့ ....ဖတ်ခဲ့ရတာကို ပြန် ရှဲ လိုက်ပါတယ်
ပီတာတစ်ယောက် အိမ်ကိုပြန်ရောက်ရောက်ချင်း မြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကြောင့် အံ့ဩမှင်တက်သွားပါတယ်။
တစ်အိမ်လုံးလည်း ရှုပ်ပွ၊ သူ့ကလေးတွေကလည်း အိမ်ရှေ့က ဗွက်အိုင်တွေထဲမှာ ညဝတ်အင်္ကျီတွေ ဝတ်ပြီး လူးလှိမ့်ဆော့နေကြ၊ ဧည့်ခန်းထဲမှာလည်း စားထားသောက်ထားတဲ့ အခွံတွေ၊ အမှိုက်တွေ ဗရပွ၊ မီးဖိုချောင်ထဲမှာလည်း ဆေးစရာပန်းကန်တွေက အပုံလိုက်နဲ့ အိပ်ခန်းဆီလာတဲ့ လမ်းမှာတောင် အဝတ်တွေ၊ ကစားစရာတွေကို ဝင်တိုက်မိပြီး ချော်လဲမလိုတောင် ဖြစ်လိုက်ပါသေးတယ်။ ဒါနဲ့ သူ့မိန်းမကိုရှာတော့ အိပ်ခန်းထဲမှာ စာဖတ်နေတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
ဒီတော့ ပီတာက "ဒီနေ့ ဒီမှာဘာတွေဖြစ်ထားတာလဲ" လို့ စိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ မေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ သူ့မိန်းမက သူ့ကို ပြုံးပြုံးကြီးကြည့်ပြီး "နေ့တိုင်း ရှင်အလုပ်က ပြန်လာပြီဆို ကျွန်မကို ဒီနေ့ဘာလုပ်သလဲလို့ မေးတယ်မဟုတ်လား" လို့ဆိုတော့ ပီတာက "အင်း"လို့ ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ သူ့မိန်းမဆက်ပြောတာက "အေးလေ ကျွန်မဒီနေ့ ရှင်မေးတာကို မလုပ်ထားဘူးလေ"
« Reply #679 on: September 13, 2011, 02:22:46 PM »
Quote from: hotsexygirl on September 12, 2011, 05:47:43 PM
အဲဒါနဲ့ ယောက်ကျားက စိတ်တိုပီး ပြုံးပြုံးကြီးလုပ်နေတဲ့ မိန်းမကို ကျွေးလိုက်တယ်လား ဟင်